Nandrolone Decanoate (DECA) vovoka (360-70-3) hplc≥98% | AASraw
/ Products / Anabolika Steroids / Nandrolone Poids Series / Nandrolone Decanoate (DECA)
SKU: 360-70-3. Sokajy: Nandrolone Poids Series, Anabolika Steroids
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaiza-manao sy ny fahaiza-manao manomboka amin'ny gram amin'ny filaharan'ny volan'ny Nandrolone Decanoate (DECA) (360-70-3), eo ambany fanaraha-maso CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Nandrolone Decanoate (DECA) video vovo
Nandrolone Decanoate (DECA) peul basic characters
Name: Fanondranana Nandrolone Decanoate (DECA)
Meny fitetezana 428.65
Color: Fotsy hoditra mavo mena
Rano Nandrolone Decanoate (DECA) fampiasana vovoka amin'ny tsingerim-pandaminana
Ravinkazo roahin'ny DECA
Ny volo Nandrolone Decanoate / poopy DECA dia fantatra ihany koa amin'ny DECA rongony drabolinina, DUrabol, poeta DECA.
Ny volo-koditra DECA, angamba ny faharoa-fantatra indrindra amin'ny steroid anabolic fantatra amin'ny testosterone. Toa ny ankamaroan'ny mpitsoa-ponenana an-tsokosoko sy ny maro izay efa niaina tamin'ny tsingerin'ny kansera dia mieritreritra fa ny vokatra tsara indrindra dia mety ilainy ny fampidirana vovony DECA. Na izany aza, raha ny marina dia tsy manana fananana anabolika manokana io fitambarana io: ny steroïde hafa dia mety afaka manao ny zava-drehetra ho an'ny fitomboan'ny hozatra izay mety ho vitan'ny DECA.
Rano Nandrolone Decanoate (DECA) Fampiasana vovoka
Ho an'ny vehivavy, 50-100mg isan-kerinandro dia atolotra, ho an'ny lehilahy, 100-200mg isaky ny herinandro no soso-kevitra.
Ankoatr'izay, ny atleta dia manana olana miray, matetika amin'ny fampiasana ny poeta DECA amin'ny tsingerin'ny tsiranoka amin'ny steroid dia misy vokany tsara amin'ny fanampiana fanampiana. Na dia ny dipoavatra toy ny 100 mg / herinandro aza dia ampy ampy ho an'ity tanjona ity amin'ny tranga maro.
Iray amin'ireo steroid tsara indrindra nahazo ny anabolic amidy hatramin'izao; Ny DU Rohol dia manamboatra anarana ho azy. Ny fametahana ny ADA, ny poeta DECA, ny poeta DECA Durabolin dia mifototra amin'ny hormonon steroid Néronolone. Anisan'ireo steroids anabolic ampiasaina indrindra amin'ireo atleta mikasa hanatsara ny fahaizany. Manome tombontsoa mahavariana mandritra ny vanim-potoana tsy an-kiato, fa ankasitrahina ho an'ny tombontsoa ara-pahasalamana izany. Nandritra ny taona maro nifandirana ny fanafody steroide, ny fiantraikan'ny VIA poofotsy Durabolin dia nihanahavona tamin'ny tahotra sy ny fanahiana momba ny zavatra toy ny 'hatezerana rojo'. Izany dia ampahany noho ny fifandraisany amin'ny testosteron sex hormone sy ny fampahalalana miseho isan-karazany izay misy manodidina ny zavatra azony atao.
Ny Nandrolone (ny hormone steroida izay mahatonga ny DECA rongony Durabolin) dia niseho voalohany tao amin'ny 1960 tamin'ny fikasana hampiasa ara-barotra. Apetraho amin'ny anaran'ny varotra DECA Rohro Durabolin, dia namoaka dikan-teny maro ary nanova ny fe-potoana. Na dia eo aza izany, ny DUA Pulver Durabolin dia mbola mamaritra ny anarana mahalaza ny zava-mahadomelina any. Noho ny tahotra ny zavatra azony atao, dia voafetra ny fidirana amin'ny zava-mahadomelina any Etazonia. Na izany aza, ny poezia DECA Durabolin dia mbola mitoetra hatramin'ity fitsaboana malaza ity izay malala noho ireo karazan-javatra izay azony atao.
Fampitandremana amin'ny vovo-dite Decanoate Nandrolone
Ny vehivavy dia tokony hiseho famantarana ny virilization, toy ny fanalefahana ny feo, akne, tsy fanarahan-dàlana. Amin'ny vanim-potoan'ny porofon'ny virilisma maivana, mba hisorohana ny virilization tsy misy fetra, ilaina ny fampiatoana ny fitsaboana amin'ny zava-mahadomelina.
Ny doka DECA Durabolinina dia matetika no mampisy fihenan-tsakafo hafa amin'ny fanarenana ny famokarana testosterone voajanahary taorian'ny fiovan'ny diabeta. Ny fiantraikan'ny tsimokaretina hafa eo amin'ny libido sy / na ny erectile dia mahazatra, fa matetika raha ny dosage farafaharatsiny 200-400 mg / herinandro na raha ampiasaina irery ny zava-mahadomelina amin'ny dose mahomby. Ny olana dia ratsy kokoa raha tsy mifandray amin'ny testosterone na dingana lehibe amin'ny endrona maro hafa toy ny trenbolon, Masteron, na Dianabol ny dite vidy DECA. Misy fahasamihafana lehibe manokana ho setrin'ny fihoaram-pefy eo amin'ny libido sy ny erectile. Azo atao ihany koa ny famoizam-po.
Rano Nandrolone Decanoate vodiny Fanoroan-dalana hafa
Ny Nandrolone Nandrolone Decanoate (DECA) dia miteraka fanafody lalim-paka lalina, indrindra amin'ny gluteal muscle. Ny fampiasana dia tokony hiorina amin'ny valin'ny fitsaboana sy ny fiheverana ny loza. Ny poety Nandrolone Decanoate / poopy DECA dia tokony hoheverina ho fitsaboana sy fitsaboana adidy, ary raha azo atao, ny fitsaboana dia tokony handefitra.
Ny tombony fanampiny amin'ny poezia DECA Durabolin (nandrolone) dia ity volo ity dia somary mild amin'ny resaka voka-dratsy eo amin'ny hoditra sy hoditra. Izany dia satria ny enzyme 5-alpha reductase dia mihetsika mba hampihenana ny herin'ny nandrolone, raha mifanohitra kosa ny steroid maro hafa anabolika dia tsy misy atahorana io enzyme io, ary ny herin'ny testosterone dia mihamitombo izany.
Rovan'ny poofa vita amin'ny DECA
Lehibe kokoa noho ny testosterone mety, ny poofa papula DURA Durabolin dia manana valim-bavaka mahery vaika ambony. Na dia eo aza izany, dia ny 37 (ny testosteron dia volo monohydrome duraboline) dia ny 100 (testosterone dia 20.) Ny fampihenana ny DHN na ny dihydronandrolone, ny poohin-dite DECA Durabolin dia mihelina kokoa ary manolo-tsaina mora kokoa ny miteraka steroïde anabolika any. Ilaina ny fahombiazany amin'ny ampahany amin'ny asa ambany ambany azy. Raha ny poofilan'ny DECA Durabolin dia afaka mamono ao amin'ny ra, dia toy izany amin'ny siramamy XNUMX% raha oharina amin'ny testosterone. Fantaro fa na dia eo aza izany, dia mety mbola mila mahatsapa ny maha-progestin azy ianao.
Ahoana no hividianana volo Nandrolone decanoate; Hividianana vovoka DECA avy ao AASraw
Ny AASraw dia manome ny fahadiovana 99% Nandrolone Decanoate / DECA vovoka poizina ho an'ny mpandidy biriky na laboratoara ambanin'ny tany noho ny fampiasana fanoherana. .
10g DECA vovobony roapolo
12g DECA vovobony roapolo
Nandrolone Decanoate vody vs Nandrolone phenylpropionate powde